Ahụmịhe nke mmụta na nkuzi BIM na ọnọdụ metụtara CAD - Geofumadas
Ahụmahụ nke mmụta na izizi BIM na ọnọdụ dị na CAD
Disemba, 2018 AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Microstation-Bentley
Enwere m ohere iso Gabriela na-emekọrịta ihe dịkarịa ala ugboro atọ. A mbụ, na ndị na klas na mahadum ebe anyị fọrọ nke nta ka idaba na ngalaba nke Civil Engineering; mgbe ahụ na klas bara uru nke ndị na-arụ ọrụ na teknụzụ na mgbe e mesịrị na oru ngo nke mmiri mmiri Rio Frío na mpaghara Cuyamel, na mgbago ugwu nke Honduras na ụlọ ọrụ Tunnelboring. M na ihe ịma aka m na-etinye NeoData n'ọrụ ma na-achọ otú ndị nyocha ahụ si hapụ akụrụngwa ochie ahụ wee mụta iji Leica ọhụrụ na-abịa site na Munich nke wetaara ụlọ ahụ na koodu Bar; Ọ na-alụ ọgụ ka nhazi na ọrụaka wee nwee isi ọgbụgba nke onye isi Colombia na onye German ọzọ.
Mkparịta ụka anyị na nso nso a na-atọ ụtọ nke ukwuu nke na anyị kpebiri ime ka ọ bụrụ isiokwu. Taa, dịka m na-akpọkarị ya Gab!, Ikekwe onye isi BIM Master Master na nke a, ebe ọ nọ na Honduran n'obi, mana ya na ogwu nke azụmaahịa mba ụwa karịa nkwa.
-Na Geofumadas n'afọ ndị na-adịbeghị anya Agwara m banyere BIM, ọ bụ ezie na ọ bụghị karịa. You nwere ike ịkọwapụta anyị ntakịrị gbasara ya maka elekwasị anya na mkpa?
Ọfọn, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị anụworị banyere BIM (Buildingdị Ozi Mgbasa Ozi ,lọ), ọ bụghị ọtụtụ ịghọta ihe ọ bụ ịmụ usoro BIM iji mejuputa ya na ụlọ ọrụ. Ikekwe otu ụzọ m ga-esi were ya bụ ịgwa gị mmetụta m nwere banyere ụmụ akwụkwọ m Revit (Architecture, MEP and Structural) na gburugburu BIM, na-akọwapụta echiche mbido, yana ihe si na ahụmịhe nke m. ị chere?.
-Ma n'ezie. Abụ m ntị niile.
Na mbụ, maka ndị ka na-anụ ihe nkiri BIM, dị jụụ, anyị nwere ike ikwu na ọ bụ okwu dị nso. Building Ozi Model (BIM) a kọwara dị ka a nlereanya mma ọmụma, esịnede multiple ọdụ data, na ihe na ike na-akọrọ ọtụtụ ndị nwere mmasị nile lifecycle nke imewe, ewu, ime ihe na ọbụna imegharị ihe maka iji nke ụlọ. Ntughari ma ọ bụ na-erughị na transliterating nkọwa nke NBS (Ntọala Ụlọ Akwụkwọ Mba).
N'ihi ya, ọ dị mkpa usoro a, ọ bụ ya mere o ji nwee nnabata dị ukwuu na mba ndị mepere emepe. N'ihi na ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ, na mmekorita, yana faịlụ dijitalụ kpamkpam, yana nlele na atụmatụ ka mma. Na mgbakwunye, hazie ọrụ anyị oge niile dịka iwu ndị dị ugbu a, yana njikwa ka mma, nchọpụta esemokwu, ịchekwa ego, mbelata mkpofu na obere oge.
-Ọ dị mma.
N'ezie ọ na-ada ezigbo mma! Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, teknụzụ adịghị emetụta omume, karịsịa na mba ndị na-emepe emepe ebe akụ na ụba anyị dị oke. N'agbanyeghị nke ahụ, echere m na BIM ga-emeri ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
-Ọfụma, mana ka anyị ghara inwe nchekwube site na mbido. Gwa ndị na-agụ akwụkwọ m etu ahụmịhe gị siri bụrụ.
Ok ??? Site na ahụmahụ m dị ka onye ndụmọdụ na onye nchịkwa BIM. N'obodo mba Central America, CAD ka dị ezigbo mkpa, a na-ejikwa ya. E nwere ndị ọkachamara ole na ole na-eji Revit na ọtụtụ nanị Revit Architecture; ha bụ agwaetiti na-arụ ọrụ naanị. Anụla m ụlọ ọrụ ebe ụlọ ụlọ ahụ na-emezi ụkpụrụ ụlọ ya na Revit, na-aga n'ihu na AutoCAD ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ndị na-emepụta ya nwere ike ịrụ ọrụ na ya. Ọ bụ n'ezie oge ịla n'iyi.
N'ihi ya nkwụsi ike na, ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ na BIM, anyị ga-azụ ọ bụghị naanị ndị na-emepụta ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa ndị ndụmọdụ na ndị ọrụ ngo, ịkpọ aha ndị kachasị mkpa. Ahụla m ọtụtụ ndị ọkachamara na mba m bụ ndị nwere afọ ojuju na ogo ha ma gharazie ịmụ ihe, ha achọghị imeziwanye. Ha na AutoCAD nọrọ ma ọ bụ ebe ahụ ka ihe ahụ nwụrụ. Ọ dị ka ibi n'oge nke ojii na oji telivishọn mgbe enwere ụwa dijitalụ na-eche anyị.
- Aghọtara m, na mmeghachi omume na mgbanwe na nkwụsị na-adịkarị na ọnọdụ ndị a. Mana ị hụla mmejuputa BIM ọ bụla na Honduras?
Enweghị m eziokwu niile, mana ahụbeghị m mmejuputa BIM na ụlọ ọrụ mana -ekwu banyere usoro, ọ bụghị na-atụle 3D na nsụgharị naanị - Oge ụfọdụ ọ na - ewe iwe ma eche m na otu puku ugboro ịkwaga ma laghachite n’ihe dịka afọ iri, ikekwe ọ nọ na - aba mba n'oge ahụ. Ọ dị ịtụnanya na onyinye ọrụ BIM niile dị na mba ndị ọzọ, n'ezie ọ dịghị mfe ịme mkpebi ahụ maka ọtụtụ ebumnuche -maka ugbu a-.
- Ma olee ihe ị chere na mmetụta ndị ahụ ka BIM ghara ije ije na nguzozi anyị na-atụ anya ya?
Enwere ọtụtụ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na m ga-agwa gị na akwụkwọ ọzọ gbasara ihe kpatara BIM ejighi biri na mba Central America anyị. N’ile anya nke oma, enwegoro m ohere iku ndi okacha amara n’ulo n’enwekwu nkwuputa na ewere m ohere iwebata ha BIM. Otu mkpụrụ aja ... Ọtụtụ n'ime ha anụbeghị ya, mana mgbe ha mere ngosi, ha nwere mmasị; inwe ike ịrụ ọrụ mgbagwoju anya, ndị sụgharịrị, akụkụ anya. Ana m anwa imesi akụkụ ahụ ike, na otu ha ga-esi rụọ ọrụ ha, m na-egosi gị ụfọdụ mmemme BIM dị n'ahịa dị ka AutoDesk Revit, Bentley AECOsim, ArchiCAD, akwụkwọ ntuziaka na iwu BIM ndị dị adị, na otu o si emetụta ụwa niile. Ana m akuziri ha na BIM abụghị sọftụwia ma ọ bụ ụdị 3D, nke megidere ihe ụfọdụ mmadụ chere, ọ bụ usoro.
-Aghọtara m ntakịrị. Abụ m onye nkuzi AutoCAD n'oge ahụ mgbe ị ga - eme ka ihe atụ dị n'etiti tebụl ịse ihe, kompas, onye na-achị ihe yiri ya, okpokoro isi, na gburugburu, dechapụ, wepụkwa iwu ...
Foto a nke Nyocha nke BIM, ọ na-eju ụmụ akwụkwọ m na ndị ọkachamara m anya m na-agwa okwu. BIM na mba ndị mepere emepe na-enwe nnukwu iru; na mba ụfọdụ ọ bụrụlarị usoro iwu gọọmentị. Mgbe anyị malitere na klaasị, ọ na-eju ha anya etu o si dị mfe imetọ na Revit. Echere m na AutoCAD dị mgbagwoju anya ma e jiri ya tụnyere Revit n'ihi na ọ dị mfe ịga ịme ngosi uwe wee hụ ka ihe niile si eme. Ha na-enwe ọ excitedụ mgbe ha na-agagharị na vidiyo, mgbe ha were igwefoto were igwefoto ahụ na mgbe ha nwere ike ịhụ nsonaazụ ikpeazụ ha.
Ajụrụ m otu nwa akwụkwọ Injinia Injinịa otu ụbọchị ihe o chere maka ịgbanwee site na AutoCAD na Revit, ọ gwara m na ọ were ogologo oge iji mee mkpọtụ ahụ. Yabụ ozugbo ha zutere ya, ọ bụ ihe ọzọ, anyị nwere ike iji ọtụtụ awa wee nwee mmasị dị ukwuu; oge na-efe. Enweela m ụmụ akwụkwọ ndị na-abụghị ọkachamara na-ewu ụlọ dịka ndị injinia sistemụ na ha na-amụkwa otu ihe ahụ, ha nwere ọ excitedụ n'ihi na ha na-ekwu na ha ga-arụ ụlọ ha. Yabụ na nke ọtụtụ mmadụ chere, mmemme BIM anaghị esiri ike mmụta, mana ha chọrọ nraranye na omume. Ọ bụrụ n ’ịsụ asụ bekee ọ dị nfe karịa ka enwere ọtụtụ enyemaka na ntanetị n’asụsụ ahụ, mana ị nwere ike ịchọta enyemaka na Spanish oge niile.
-M nọ na BIM N'ezie na CentroCAD Nicaragua. Mwute na nsogbu ahụ hapụrụ m n'etiti ma anyị ga-emecha usoro ahụ na Skype. Ma echetara m na ụzọ bara uru na nke nta nke nta ịzụlite ọrụ bụ ihe na-atọ ụtọ.
Ee, ọ bara uru iji nwayọ nwayọ. Lelee ihe eserese, ntụgharị nke ime ụlọ. Ná ngwụsị nke izu mbụ, ya bụ, mgbe awa iri na asaa gachara, m ga-ahapụrụ gị ọrụ izizi gị. Ulo okpukpu abuo, ka emee ya na ubochi abuo. Ọ dị ịtụnanya etu mmemme mmemme BIM ndị a si eme ka ndụ anyị dị mfe, anyị ga-arụkwa ọrụ ngwa ngwa. N'ebe a, m na-egosi gị ihe atụ nke otu n'ime ụmụ akwụkwọ m nyere: Nicolle Valladares.
Mgbe ahụ, anyị na-aga Revit Structures na MEP na nke a bụ ebe ihe na-adọrọ mmasị, n'ihi na nke a bụ ihe ọhụrụ, n'ọtụtụ n'ime ọmụmụ na mba m ha na-enye Architectural Revit. Ya mere, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ụdị ndị a ka ha na ibe ha na-emekọrịta ihe, na otu esi eme mmekọrịta BIM. Dịka ị pụrụ ịhụ subprojects site na ọzụzụ. Na eserese ndị a ị ga - ahụ ụdị nhazi, nrụpụta paịlị na ọrụ nhazi oge mgbe anyị na-arụ ọrụ na mmekorita.
-M ghotara obi uto gi na Revit. Mana ị gwara m na ị na-akuzikwara ha ụzọ ọzọ ndị ọzọ.
N'ezie, dịka anyị tụlere, BIM karịrị Revit, ọbụlagodi site na Bentley Systems, atụmatụ I-model nwere nnabata nke BIM nke gụnyere njikwa ọrụ, njikwa akụ na-atọ ụtọ. Mana m na-eji Revit n'ihi ewu ewu nke AutoCAD na mpaghara a, na-ele anya karịa Revit, iji kụziere ha ụkpụrụ BIM. Anyị na-ahụkwa ihe ngosi nke Presto (BIM 5D etinyere na mmefu ego), Bentley Synchro (BIM 4D etinyere na atụmatụ), Dynamo (usoro nhazi na mmemme na Revit), n'etiti ndị ọzọ, ịhapụ ha ogwu iji gaa n'ihu na-amụ mmemme ndị ọzọ iji meziwanye ọkachamara.
- Gwa m ihe nkesa gị na-esote ụbọchị ndị a.
Ugbu a, anyị ga-enwe ohere ịmalite njem Navisworks ma enwere m obi ụtọ ịga n'ihu na BIM 4D (Atụmatụ), ọbụna na obere ìgwè. E nwere ọtụtụ ihe ịkụziri na BIM, ndị mmadụ amaghịkwa ihe a nile. Dị ka enwere ihe ọmụma na Ịntanetị, ọ bụghị mgbe niile ka a na-eme nnyocha na omenala ha, ọ bụ naanị ihe ha maara. Nke ahụ bụ nnukwu ndudue na ngwa ngwa ma ọ bụ emesịa kwụọ ụgwọ ahụ, n'ihi na onye na-adịghị emelite na-anwụ anwụ.
- Ma olee ihe ị ghọtara banyere ihe dị mma nke ụmụ akwụkwọ na njedebe nke usoro ahụ?
Enwere m ike ịkwado na ụmụ akwụkwọ m, ozugbo ha nabatara usoro ahụ, na-enye mgbanwe dị egwu, echiche ha bụ oghe nye ohere niile ha nwere ike ime na ụwa BIM a na mgbanwe nke dijitalụ. Ọ dị ka à ga-asị na ha maara ihe ọma ma ghara ịlaghachi azụ. AutoCAD ezughị oke ugbu a.
-Ekwenyere m na gị. Nchọgharị maka nkuzi AutoCAD na-achịkwa Google. Olee otu i siri hu nsogbu ndi umu akwukwo a na-agha mgbe emesiri akwukwo a?
Ihe iseokwu a bụ na anyị nwere ike ịzụ ndị ọrụ ahụ, mee ka ha chee echiche dị iche, mana ụlọ ọrụ ga-enwe ngwanrọ ka ha nwee ike ịnọgide na-enweta ahụmahụ. M zutere onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nke nwere ike iṅomi na akụkụ 3, ma ọ ghaghị ịrụ ọrụ na AutoCAD n'ihi na ọ bụ naanị ihe dị na ụlọ ọrụ ya. Ọ bụ nkụda mmụọ.
Ya mere mgbanwe nke iche echiche na BIM abụghị naanị site n'aka ndị na-emepụta ya, ma ọ ghaghị iru isi, ndị nlekọta, ndị nwe, ndị ahịa, ndị ọrụ oru ngo na ndị na-ewu ụlọ. Ọ bụ ya mere anyị ji ekwu banyere usoro ndụ nke ọrụ ahụ, ọ bụghị naanị na ọkwa ahụ. Ọ ghaghị ịbụ mgbanwe dị mkpa nke na-emetụta ụlọ ọrụ ahụ dum, n'ihi na nanị mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịhụ mgbanwe dị ukwuu na etu anyị si emepụta ọrụ anyị na BIM. Na nkenke, mgbanwe nke usoro pụtara itinye aka na nraranye.
Mkparịta ụka ahụ mere ka m chee echiche. Na-eche echiche nke ukwuu, ọkachasị mgbe anyị na-ekwu maka ihe ịma aka nke ọnọdụ ndị a nwere maka amụma ọha na eze ịhazi BIM maka ọrụ dị nro. ya mere, n’okpuru nchekwube di iche iche, anyi haziri kọfị n’ime ihu igwe n’ọnwa Disemba azụ n’oge ekeresimesi.
N'ajụjụ ọnụ a na-ajụkarị, Gabriela Rodríguez, Injin Injinia, Master in Bim Management si Mahadum Rey Juan Carlos nke Spain. Na ajụjụ ndị editọ Geofumadas.com duziri.
[search ufwp = »megharia» orderby = »ahịa» ihe = »3 ″ template =» grid »grid =» 3 ″]
AutoDesk BIM M-nlereanya
Previous Post«Previous Leica Airborne CityMapper - ihe ngwọta na-adọrọ mmasị maka eserese obodo
Next Post Hapụ Venezuela na Colombia - My OdysseyNext »
Otu Nzaghachi na "Ahụmịhe nke mmụta na nkuzi BIM n'ọnọdụ dịịrị CAD"
Amilcar Paz kwuru, sị:
December, 2018 na
Ezi onyinye na mmejuputa maka imewe.